Tonizia: Bilaogera Arabo Niresaka Momba ny Toe-draharaha ao Syria · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Bilaogera Arabo Niresaka Momba ny Toe-draharaha ao Syria
Voadika ny 08 Oktobra 2011 8:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Deutsch, عربي, македонски, Español, English
Notsarovana sy noresahan'ireo mpandray anjara marobe manokana i Syria tamin'ny Fihaonan'ny Bilaogera Arabo andiany fahatelo tao Tonizia tamin'ity herinandro ity. Tsy nolazaina firy tamin'ny adihevitra momba ny Syria ny fifaliana nateraky ny revolisiona tao Tonizia sy Ejypta, izay ahitana ny fitomboan'ny herisetra ataon'ny fitondrana, mananika ny 3000 ireo namoy ny ainy, kanefa tsy misy ny vahaolana resahina amin'izany.
Niompana manokana mikasika ny Syria ny ankamaroan'ny fotoam-pivoriana. Tamin'ny Alarobia, niady hevitra momba ny voka-dratsin'ny fahazotoana miserasera ao Syria ny bilaogera, nifantoka tanteraka momba ny Tafika Elektronika Syriana izany, vondrona piraty mpanohana ny fitondrana izay tompon'andraikitra tamin'ny fanimbana an-tsokosoko ny tranokalan'ny Oniversité Harvard. Marihana fa nisaotra ny Tafika Elektronika ny Filoha Bashar Al Assad noho ny ezaka nataony, Amira Al Hussaini naneho hevitra hoe: “ADALA.”
Sary famantarana ampiasain'ny mpiserasera mafana fo Syriana, mba hanentanana ny fitsaharan'ny fahamaizana
Syriana mpandray anjara iray nanambara fa “kely dia kely ihany” ny voka-dratsin'ny fahazotoana miseraserana ao Syria,” nitanisa mpandray anjara hafa izy, @weddady, nanamarika fa “maro tamin'ny voka-dratsin'ny fahazotoana miserasera ao #Syria no voafetra manokana amin'ny fanentanana ny fampahalalam-baovao any ivelany, tsy mpikarakara mivantana ny toe-draharaha izy ireo.”
Niompana momba ny lohahevitra mikasika ny fahamarinana ihany koa ny adihevitra, niaraka tamin'ireo Syriana tao an-toerana izay nanipika manokana ny maha ara-dalàna ny feon'ny Ampielezana, tahaka an'i @redrazan ni-tweet hoe:
Mandray ny feon'ny Syriana ao anatiny ho toy ny marina ary latsa-danja amin'izany anefa ny an'ny ampielezana, mahatsikaiky. #Syria
Nilazalaza momba ny mpandray anjara Syriana tsy fantatra anarana, @ahmed ni-tweet hoe:
Ahoana no ahafahan'ny Syriana avy any ivelany hanohana ny mpanohitra ao Syria? Misy fomba hanaovana izany ve? #ab11
Niady hevitra momba ny fandaminana ao Syria ihany koa ny bilaogera, izay matetika rava vetivety ny fihetsiketsehana ary voafetra koa ny hetsika. @ahmed nandika teny sy nandika ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpandray anjara Syriana, nilaza ny maha-sarotra ny fikarakarakana sy nanamarika fa “namorona ” ny fihetsiketsehana tselatra” ny Syriana: fihetsiketsehana maharitra 2-minitra izay nalain-tsarimihetsika & nalefa tamin'ny aterineto.”
Syria “mampihetsi-po ahy”
Ny Alakamisy maraina, iray tamin'ireo mpandray anjara Syriana nonina maharitra tao Syria no niresaka momba ny faharatsian'ny toe-draharaha ao amin'ny firenena, ka nahatonga an'ilay bilaogera Jordaniana Naseem Tarawnah (@Tarawnah) nanamarika hoe:
Tsy azo lavina, #Syria no lohahevitra nampientam-po indrindra tamin'ny #AB11 & amin'ny maha Jordaniana ahy dia mampihetsi-po ahy tanteraka izany. #BlessSyria.
Nitanisa ny mpandray fitenenana, Tarawnah nanoratra ihany koa, taorian'ny fito volana, “tsy nisy vondrona mpanohitra nampiseho ny fahavononany handrava ny fitondrana,” ary nanontany hoe “Andeha ho aiza isika ankehitriny?”
Bilaogera Syriana-Espaniola Leila Nachawati nilaza momba ny mpandray fitenenana ihany koa, nanazava izy hoe:
Mpandray anjara Syriana iray nanazava ny fomba itadiavan'ny governemanta Syriana hampirehitra ny “sektarisma” (fiandaniana firehan-kevitra) mba hiteraka ady an-trano .
Na dia mahatsiarivina aza ny toe-draharaha niseho, nisy ihany ny fanantenan'ireo mpandray fitenenana Syriana tao anatin'ny adihevitra. Araka ny voalazan'i Lilian Wagdy, nanambara ihany koa ny bilaogera fa ny fanantenana farany ho an'i #Syria dia ny fahombiazan'ny revolisiona #Egypt, ary tsy te “hiaina mifanakaiky tsy misy fifandraisana” ny Syriana, fa te ‘hiara-monina’ [izy ireo].”